Ozi banyere OnePlus: malite, mobiles, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporosis
OnePlus bụ onye na-emepụta ekwentị guzobere na China. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ na gam akporo, ebe e hiwere ya na 2013. Ha bụ ndị a raara nye mmalite nke smartphones, ọ bụ ezie na ha na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị ọzọ dị ka telivishọn ha. Ọ bụ akara lekwasịrị anya na mwepụta nke igwe n'ime oke njedebe.
OnePlus pụtara maka atụmatụ nke ịmepụta igwe ole na ole n'afọ (ọ na-abụkarị abụọ). Modelsfọdụ ụdị ndị na-apụta maka nkọwapụta dị mma ha na ọnụ ọnụ ọnụahịa dị n'etiti ha. Lee ị ga-enwe ike ịchọta ozi niile, akụkọ na nyocha nke ekwentị OnePlus na gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ.
OnePlus ekwuputala ihe bu uzo ohuru ohuru ya mgbe otutu asusu banyere akuko ya, ...
por Aaron Rivas eme Ọnwa 4 .
OnePlus mechara kpughee ekwentị ọhụrụ ya ọhụrụ OnePlus 9 dị ka ọkọlọtọ dị mkpa ...
Sony IMX789 sensor to first on OnePlus 9 and comes with 4K video ndekọ na 120fps
Ihe ndi mmadu na-achoghi anya banyere OnePlus 9 di elu, obughi maka ihe efu. Anyị na-ekwu maka ụgbọ mmiri na-esote ...
Site na ọgbọ ọhụụ ọ bụla nke ekwentị dị elu, ihe ndị ọrụ chọrọ n'ọkwa foto ka ukwuu, kpatara ...
OnePlus Nord na-akwụ ụgwọ OxygenOS 11 na OnePlus 7 na 7T na-emeghe Open Beta 3
OnePlus na-enyezi mmelite ngwanrọ ọhụrụ n'ọtụtụ ekwentị ya. The OnePlus Nord, ka ọ dị ugbu a, ...
O nwere ike ịbụ na Machị 9 mgbe ụlọ ọrụ China gosipụtara nkwalite nke usoro OnePlus 9 maka ...
OnePlus ewepụtala ngwanrọ ngwanrọ ọhụrụ maka OnePlus Nord nke rutere dị ka OxygenOS 10.5.11. Nke a na-abịa dị ka ...
Ihe ngosi nke njirimara nke OnePlus 9
por Nerea Pereira eme Ọnwa 5 .
Eziokwu bụ na ntapu metụtara OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro anaghị akwụsị ịbata.Anyị maara na ...
por Ignacio Sala eme Ọnwa 6 .
Oge ọ bụla enwere mgbanwe na ọnọdụ na ụwa nke telephony, n'oge ọnwa mbụ (iji ...
por Aaron Rivas eme Ọnwa 6 .
Enweela ọtụtụ asịrị na-ekwu maka njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọzọ OnePlus 9. Ọtụtụ n'ime ...
Onye OnePlus 8, 8 Pro na 8T na-enweta mmelite ọhụrụ na ọtụtụ ndozi na ndozi
Onye OnePlus 8, 8 Pro na 8T na-anata ngwugwu ngwa ngwa ọhụụ batara maka ...
Launchbọchị mmalite nke OnePlus 6T na Europe bụ ọkwa ugbu a
Felitere ọnụahịa nke ụdị abụọ nke OnePlus 6